FOMBA HAHAZO A Marijuana LICENSE BUSINESS IN MASSACHUSETTS
Raha te hahafantatra ny fahazoana fahazoan-dàlana rongony any Massachusetts ianao, dia tokony ho fantatrao ny lalàna sy ny lalàna mifehy ny fampiasana rongony ampiasan'ny olon-dehibe na fitsaboana any amin'ny fanjakana.
Noharahan'i Massachusetts ara-dalàna ny rongony fampiasan'ny olon-dehibe tamin'ny taona 2016. Nanomboka teo dia nitombo ny haben'ny tsena ary nanjary zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay, ohatra, nandritra ny areti-mandringana COVID-19, dia heverina fa ilaina sy misokatra hatrany manerana ny fanjakana ireo dispensary.
Amin'ny ankapobeny, ny indostrian'ny rongony dia toa miroborobo miaraka amin'ny tsena rongony ara-dalàna vinavinaina hitombo ho $ 41.5B amin'ny 2025.
Tsy misy fetrany ny isan'ireo dispensary marijuana ara-pahasalamana na mpivarotra ambongadin-dàlana ampiasain'ny olon-dehibe ao amin'ny fanjakana (na dia tsy avelan'ny tanàna eo an-toerana aza izy ireo). Noho izany, mbola manana vintana hiditra amin'ny indostria ianao.
Karazana fahazoan-dàlana amin'ny orinasa Marijuana any Massachusetts
Ambaratonga 11 miankina amin'ny haben'ny canopy
Koperativa Marijuana asa-tanana
Mpanamboatra vokatra marijuana
Raha ny filazan'ny Kaomisiona fanaraha-maso rongony dia orinasa iray no mety manana lisansa telo isaky ny sokajy misy fanilikilihana sasantsasany.
Ny rafitry ny fahazoan-dàlana hitrandrahana rongony any Massachusetts dia mitaky fampidirana mitsangana, izay midika fa ny tompon'antoka fahazoan-dàlana hitrandraka, mamboatra, ary mivarotra. Ny fahazoan-dàlana amin'ny fambolena dia atolotra amin'ny ambaratonga misy ambaratonga ary miovaova ny sarany arakaraky ny hipetrahan'ny tranokala ao an-trano na any ivelany.
Eto ambany ianao dia hahita fampahalalana momba ny fahazoan-dàlana marijuana any Massachusetts
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HAHAZOANA LISENY BUSINESS CANNABIS any CALIFORNIA
Fahazoan-dàlana ho an'ny mpamboly marijuana
Ny frais amin'ny fambolena anaty trano dia $ 200 ka hatramin'ny $ 600 raha ny $ 100 ka hatramin'ny 300 $. Ireo mpangataka nankatoavina dia takiana mba handoa sarany $ 625 ka hatramin'ny $ 12,500 1,250 amin'ny fahazoan-dàlana mamboly anaty trano na $ 25,000 ka hatramin'ny $ XNUMX ho an'ny fahazoan-dàlana mamboly any ivelany.
Fahazoan-dàlana mpamokatra vokatra marijuana
Ny saran'ny fangatahana fahazoan-dàlana amin'ny famokarana dia $ 300 amin'izao fotoana izao, ary ny mpangataka nankatoavina dia tsy maintsy mandoa sarany $ 5,000.
Fahazoan-dàlana hividianana mpivarotra marijuana
Raha mila fampahalalana lalina kokoa momba izany ianao ny fomba fanokafana dispensary any Massachusetts tokony hojerenao ny momba azy.
Ny dispensaries dia tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana, ny famokarana ary ny varotra. Ho an'ny dingana 1, ny sarany fangatahana lisansa amin'ny dispensaire dia $ 1,500 ary ny frais fahazoan-dàlana ho an'ireo mpangataka nekena dia $ 50,000. Ho an'ny dingana 2, misy sarany fangatahana $ 30,000 ary sarany fahazoan-dàlana 50,000 XNUMX $.
Ny fanjakana koa dia manome fahazoan-dàlana momba ny orinasa bitika miaraka amin'ny sarany fangatahana $ 300 ary sarany mitovy amin'ny 50% amin'ny sarany rehetra azo ampiharina.
Fahazoan-dàlan'ny mpitatitra marijuana
Nankatoavin'ny fanjakana tamin'ny volana septambra 2019 ny fandefasana rongony. Misy lisansa mpitatitra antoko fahatelo misaraka ho an'ireo orinasa tsy mamboly, manamboatra, na manaparitaka rongony. Ny saram-pisoratana anarana ho an'ity fahazoan-dàlana ity dia $ 300, ary ny sandan'ny lisansa dia $ 1,000
Fitsipika momba ny fananana
Ny olon-dehibe mihoatra ny 21 taona dia mety manana rongony iray grama, tsy misy mihoatra ny dimy grama ny fifantohana any ivelan'ny tranony. Izy ireo dia afaka manana rongony hatramin'ny 10 grama ao an-tranony ary koa ny rongony vokarin'ny zavamaniry nambolena teo an-toerana.
Fitsipika momba ny fambolena tena
Tsy mihoatra ny enina ny zava-maniry maniry ao an-trano. Na izany aza, raha olon-dehibe maro no mitombo ao amin'ny trano iray dia avo kokoa ny fetra. Manokana, tsy mihoatra ny 12 ny zavamaniry avela hambolena ao amin'ny trano fonenana ho an'ny olon-dehibe rehetra atambatra.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fahazoan-dàlana marijuana any Massachusetts ianao, aza misalasala Mifandraisa aminay.
FIVAVAHANA MISY: MONTANA ADULT-US LISENSION MARIJUANA